गत वर्ष विश्वले नयाँ वर्ष मनाएन । स्तब्धता, अनिश्चय र भयबीच कोभिडबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने छटपटीका कारण अघिल्ला वर्षहरूमा झै नयाँ वर्षको उत्साह कत्ति पनि थिएन ।
जीवन कि अरू कुरा भन्ने विकल्पमा सबै मानिस जीवनलाई प्राथमिकतामा राख्न पुग्छन्, जीवन अमूल्य हो र सेलिब्रेसन भन्दा सावधानी सबैको प्राथमिकता थियो ।
नयाँ वर्ष शुरू हुनुभन्दा तीन हप्ताअघिबाट मुलुकभरि बन्दाबन्दी शुरू भयो । करीब ९१ लाख विद्यार्थी कक्षाकोठाबाट घरभित्र बन्द थिए । करीब ६ लाख सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू अत्यावश्यक सेवामा रहने बाहेक घरभित्र थिए । कल कारखाना, यातायात साधन, होटेल, सेवास्थल आदि सबै बन्द थिए । पढाइ हुने कक्षा कोठा आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टाइनमा परिवर्तित थिए ।
अस्पतालहरू आत्तिएको तयारीमा थिए । सीमित पत्रिका, त्यसमा पनि अनलाइन पत्रिका र डिजिटल सञ्चार माध्यमले दुःख र भयका सन्देश छाप्थे, सावधानीको शिक्षा दिन्थे ।
जो जहाँ थिए, ती त्यहीँ अडेका थिए । काठमाडौंबाट महेन्द्रनगरसम्मको यात्रा पैदलमै जान बाध्य थिए, नागरिक । जनजीवनमा अकल्पनीय अदृश्य त्रास सम्पन्न, विपन्न मुलुक सबैतिर फैलिएको थियो । लाग्थ्यो, कलियुगले मानव सभ्यतामाथि धावा बोल्दैछ, जहाँ कसैको कोही सहारा थिएन ।
कार्यालयहरू बन्द भनिए पनि सरकारी साधन प्रयोग गर्ने र अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापनमा संलग्न हुनेहरू स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीसाथ कार्यालय जानुको विकल्प थिएन । कार्यालयका ढोका र कार्यस्थलमा स्यानिटाइजर र दूरी कायम गर्ने उपकरणहरू सहित स्वास्थ्य शतकर्ता अपनाइएको थियो ।
शुरूका दिनमा कोरोना परीक्षणमा पोजेटिभ देखिने संख्या निकै कम भए पनि हामीहरू त्यत्तिकै डराएका थियौंं । कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै गएपछि कार्यालयहरू अलिकति पनि चहलपहलविहीन हुन थाले । सडक लमतन्न निद्रामा पसारिएको थियो । सधैँ चहलपहल हुने होटल, मल, सिनेमा घरमा सन्नाटा थियो ।
यसबीच एक दुर्गम जिल्लाको कोष कार्यालयका प्रमुखमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि उनको संसर्गमा रहेकाहरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परे । कार्यालय बन्द गर्नु पर्‍यो तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट नै त्यस जिल्ला मातहतका भुक्तानी क्लियर गर्नुको विकल्प थिएन, त्यसै गरियो ।
कोभिडले मानिसहरूको गतिविधिलाई निकै साँघुर्‍याएकाले केही महत्त्वपूर्ण काम गर्ने समय यही नै हो भन्ने निष्कर्ष महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उच्च व्यवस्थापन समूहले निकाल्यो । नेपालको लेखा प्रणाली गतावधिक थियो, न बजेट क्रियाकलाप ट्र्याकिङ गर्न सक्थ्यो, न सरोकारवालाको आवश्यकता पूरा गर्न सक्थ्यो, न वैज्ञानिक नै थियो । २०७२ बाट लागू गरिएको मन्त्रालयगत बजेट सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलएमबीआइएस)सँग पनि लेखाप्रणाली एकीकृत गर्न सकिएको थिएन ।
कोरोनाको बन्दाबन्दीबीच क्रियाकलापमा आधारित लेखाप्रणाली विकास गर्ने निधो गरियो र चार समूह चार स्थानमा रही भर्चुअल नेटवर्कमा आबद्ध भै प्रणाली विकासको काम थालनी गर्‍यौं । साथीहरू रमेश सिवाकोटीको संयोजकत्वमा परिचालित टोलीमा प्रणालीगत पक्षमा संसार देवान र बिजिनेसको पक्षमा भेष भुर्तेललगायत अन्य साथीहरू र विज्ञहरूले काम गर्ने र साप्ताहिक रूपमा मलाई प्रतिवेदन दिने काम गरियो । यसैबीच केही विज्ञ साथीहरू संक्रमणमा परेकाले पनि प्रणाली निर्माण र प्रयोग असार भित्रमा गर्न निकै असजिलो भयो ।
२०७७ आश्विनमा मेरो सरुवा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भयो । एकातिर कोरोना महामारीले विद्यालय/विश्वविद्यालय बन्द भएको, लामो तथा छोटो अवधिका शैक्षिक कार्यक्रमको परीक्षा हुन नपाएको र अर्कातर्फ चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राखी प्रा.डा. गोविन्द केसीले उन्नाइसौं अनशन बसिरहेको अवस्था थियो ।
गोविन्द केसीसँगको वार्ता संयोजक मलाई तोकिएकाले पहिलो काम उहाँसँग वार्ता गरेर तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने ठूलो चुनौती ममाथि थियो । म आगोमा होमिएको महशुसमा थिएँ, सहसचिव दीपक शर्मा र केही साथीहरूले सहयोग गरिरहेका थिए । म हाजिर हुँदा डा. केसीको आमरण अनशन सोह्र दिन भैसकेको थियो ।
४,३३,१८० विद्यार्थीमा मनोसामाजिक समस्या आउने सम्भावना थियो । शिक्षक, अभिभावक, जनप्रतिनिधि सबैसँगको छलफलका आधारमा मंसिर ९ बाट ४१०५ परीक्षा केन्द्रमा भौतिक दूरी कायम गरेर संक्षिप्त परीक्षा लिने काम सम्पन्न गर्न सकिएकोमा हामी सबै कर्मचारीले गर्व महशुस गर्‍यौं । यसले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि के कस्ता जनस्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने आधार पनि दियो । विश्वविद्यालयहरू पनि हाइब्रिड मोडेलबाट परीक्षा लिन सफल भए भने छोटा अवधिका शैक्षिक कार्यक्रमको परीक्षा लिने वातावरण पनि बन्यो ।
कोभिड–१९ महामारीले जनजीवन संत्रासमय बनायो, आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्‍यो, मानिसबीचको व्यवहार बदलिदियो, माया र समवेदना साट्ने शैली पनि बदलियो र आर्थिक–शैक्षिक गतिविधिलाई रोकिदियो । तर यति हँदाहुँदै पनि यसले केही शिक्षा भने दिएको छ ।
दोस्रो, महामारीले संघर्ष गर्न, जिउने वैकल्पिक उपाय अपनाउन, दैनिकी परिवर्तन गर्न, दुःखमा एकअर्कालाई सघाउन अनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन सिकाएको छ । यस्तै अझ ठूला महामारी आउला कि भनेर तयारी गर्न सिकाएको छ । आर्थिक, सामाजिक र विकासका रणनीतिको पुनर्खोजलाई बल पुर्‍याएको छ ।